Top News:-Deeqdii Dowladda UK oo gacanta u gashay Al-shabab | Kobciye24.com
Top News:-Deeqdii Dowladda UK oo gacanta u gashay Al-shabab
Dec 4, 2016 - jawaab
Wargeeyska Daily mail ee kasoo baxa Dalka ingiriisk ayaa daabacay Warbixin si weeyn u faaqideeysa meela ay ku baxdo kaalmasda ay Doowladda ingiriiska siiso Soomalia.
Doowladda ingiriiska yaa waxaa ay Deeq Gar-gaar ah siisaa Soomaliya iyadoo usoo marsiineeysa Heey’addo Maxalli ah iyo kuwo Caalami ah, waxaana lashaaciyay in qeeyb ka mid ah kaalmadda doowladda ingiriiska ay sii so Soomalia ay gacanta u gasho Dagaalamaaya Al-shabaab iyo daacish.
Qoraallo si Qarsoon loo helay oo ay daabacday Waaxda Doowadda Britain iuqaabilsan Horumarinta caalamiga ah ayaa Waxaa ay muujineetsaa in Sababta koowaad oo ay Kaalmadu gacanta ugu gashay Uruuradda kasoo Horjeedda Doowladda Somali ay tahay in Gacanta loo galiyay Heey’addo u Calool nugul Argagixisadda.
Lataliyaal lawareeystay ayaa Sheegay in Saraakiisha Kormeerku ayasan Awood u laheeyn in ay Tagaan Goobaha ay lagu Bixiyo kaalmmadda Si loo Soo kormeero.
Saraakiil ka Tirsan waaxdda Horumarrinta Caalamka u qaabilsan Ingiriiska ayaa Qiray in Dadaaladii Caalamiga ahaa ee uu hugaaminay Ra’iisul wasaarihii Hore ee ingiriiska David Camrom Xilligii ay Socotay qeeybo badab oo dalka Soomalia ka mida ha aysan amaan ahayn, islamarkaana Lacago badan oo kaash ah Doowladda ingiriisku ay ku bixisay Soomalia, taasi oo Qeeyb ahaan Gacanta u gashay al-shabaab iyo Dacish.